मिल्लान त ओली–नेपाल ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मिल्लान त ओली–नेपाल ?
कात्तिक १८ गते, २०७७ - ०७:४७
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – कतिले अनुमान लगाए– अब नेकपा विभाजन हुँदैछ, उनलाई फेरि सक्रिय हुन आग्रह भयो । कतिपयले त पूर्व एमाले ब्युँताएर प्रदीप नेपाललाई अध्यक्ष नै बनाउन लागेको भनिदिए । तर, नेपालले भने, ‘पार्टी एकता बचाउन तपाईंले माधव कमरेडलाई सम्झाई दिनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरू (ओली निकट नेताहरू) को आग्रह थियो ।’
कात्तिक १८ गते, २०७७ - ०७:४७ मा प्रकाशित